Ramadaan - BBC News Somali
Posted at 10:36 26 Abriil 202110:36 26 Abriil 2021
'Muslim ma ihi haddana bisha Ramadaan waan Soomaa'
Bishan Barakeysan ee Ramadaan Muslimiinta daafaha dunida ku kala nool way soomaan, haddaba qaar ka mid ah dadka aan Muslinka ahayn ayaa ka warramaya sababaha ay Ramadanka u Soomayaan.
Posted at 16:28 19 Abriil 202116:28 19 Abriil 2021
Cali Xalane, BBC laanta Carabiga
Posted at 12:19 16 Abriil 202112:19 16 Abriil 2021
Khayrka 10-ka hore ee bisha Ramadaan
Video caption: Sheekh cabdi Xayi: Khayrka 10-ka hore ee bisha RamadaanSheekh cabdi Xayi: Khayrka 10-ka hore ee bisha Ramadaan
Sheekh cabdi Xayi oo ka hadlaya Khayrka ku jira10-ka hore ee bisha barakeysan ee Ramadaan
Posted at 10:21 15 Abriil 202110:21 15 Abriil 2021
Sawirrada bisha ramadan ee daafaha caalamka iyo xayiraadaha korona
Muslimiinta ayaa bisha Ramadaan Soomaya sanadkii labaad iyadoo dunida uu ka jiro fayraska karona
Posted at 11:39 18 Maajo 202011:39 18 Maajo 2020
Muslimiinta sannadkan wuxuu Ramadaankan u yahay mid ka duwan kuwii hore maadama lagu soo rogay xayiraado saameyn ku yeelatay cibaadooda si looga hortaggo fiditaanka feyraska Korona, balse waxaa dunida soo maray cudurro kale oo safmar ah oo saameyn ku yeeshay muslimiinta xilliga bisha Ramadaan.
Posted at 13:29 26 Abriil 202013:29 26 Abriil 2020
Sidee bedqab loogu soomi karaa inta lagu jiro Coronavirus
Marka la gaaro bisha Soon-qaad ,Muslimiin badan ayaa ka fogaada wax cunista iyo cabsita inta u dhaxeeysa qorax soo baxa iyo qorax dhaca. Sanadkaan dunidu waxaa la soomayaa iyadoo dalalka caalamku ay ku jiraan xayiraado lagu xakameeynayo coronavirus.
Posted at 11:28 22 Abriil 202011:28 22 Abriil 2020
Maxay culimada ka dheheen saameynta coronavirus ee Ramadan?
Mucaawiya Muxumed Buraale
Ramadaankan wuxuu kaga duwan yahay Ramadaankan waxyaabo badan, waxaa la xiray misaajidda, waxaa dadka loogu baaqay inay kala fogaadaan, dalalka qaar waxay shacabkooda ugu baaqeen in salaadda taraawiixda ay guryaha ku tukadaan, waxaa jiraa Bandow looga hortaggayo coronavirus.